शिवहरिको ‘लक्का जवान’ निर्माणको घोषणा, कलाकारमा दिलिप–प्रियंकादेखि वर्षा–सलोनसम्म, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं । हास्य कलाकार शिवहरि पौड्यालको लेखन/निर्देशनमा सिनेमा ‘लक्का जवान’को निर्माण हुने भएको छ । बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै सिनेमा निर्माणको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।
धुप्र पन्त प्रस्तुतकर्ता रहेको सिनेमामा किरण केसी, दिलिप रायमाझी र शिवहरि पौड्याल कार्यकारी निर्मातामा छन् । त्यस्तै अनसुया श्रेष्ठ वन्त निर्माताको रुपमा रहेकी छन् । सह–निर्मातामा भने राजाराम पौडेल, दीपेन्द्र खनिया, सुरेन्द्र केसी, सुशील अर्याल, डिजे अर्याल र राज केसी छन् ।
कमेडी जनारामा निर्माण हुने सिनेमामा निर्देशक स्वयंमका साथमा दीलिप रायमाझी, किरण केसी, प्रियंका कार्की, वर्षा शिवाकोटी, सलोन बस्नेत, राजाराम पौडेल, सुरेन्द्र केसी, सरोज खनाल लगायतको अभिनय रहनेछ । सिनेमामा बाबुल गिरीको संगीत, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन रहनेछ ।
भदौंको शुरुवाट छायांकनमा जाने सिनेमाले चैत ७ गतेलाई आफ्नो प्रदर्शन मिति तोकेको छ ।